Izesekeli Abakhiqizi Nabahlinzeki - I-China Accessories Factory
I-plywood ikakhulukazi ihlanganisa i-birch plywood, i-hardwood plywood kanye ne-poplar plywood, futhi ingangena kumaphaneli ezinhlelo eziningi ze-formwork, isibonelo, uhlelo lwe-formwork yohlaka lwensimbi, uhlelo olulodwa lwe-formwork oluseceleni, uhlelo lwe-wood beam formwork, uhlelo lwe-steel props formwork, uhlelo lwe-scaffolding formwork, njll… Kungokomnotho futhi kuyasebenza ekuthululeni ukhonkolo wokwakha.
I-LG plywood umkhiqizo we-plywood onwetshwe ifilimu elifakiwe le-phenolic resin engenalutho ekhiqizwa izinhlobo eziningi zosayizi nokuqina ukuze kuhlangatshezwane nezidingo eziqinile zamazinga omhlaba.
I-PP Hollow Plastic Board
Isakhiwo sesakhiwo esingenalutho se-PP samukela inhlaka yobunjiniyela esebenza kahle kakhulu evela kwamanye amazwe njengesisekelo sezinto, ingeza izithasiselo zamakhemikhali ezinjengokuqina, ukuqinisa, ubufakazi besimo sezulu, ukulwa nokuguga, nobufakazi bomlilo, njll.
I-Plywood Ebhekene Nepulasitiki
I-Plywood ebhekene ne-Plastiki iyiphaneli yekhwalithi ephezulu ehlanganiswe nodonga lwabasebenzisi bokugcina lapho kudingeka khona okubukeka kahle kwendawo.Kuyimpahla ekahle yokuhlobisa izidingo ezihlukahlukene zezimboni zokuthutha nezokwakha.
I-formwork tie rod isebenza njengelungu elibaluleke kakhulu ohlelweni lwe-tie rod, amaphaneli e-formwork yokubopha.Ivamise ukusetshenziswa kanye ne-wing nut, i-waler plate, isitobhi samanzi, njll. Futhi ishunyekwa kukhonkolo esetshenziswa njengengxenye elahlekile.
I-Flanged Wing Nut itholakala ngamadayimitha ahlukene.Nge-pedestal enkulu, ivumela umthwalo oqondile othwala ama-walings.
Ingagqunywa noma ikhululwe kusetshenziswa isikrufu sehexagon, umucu noma isando.